Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Rava ny indostrian'ny Travel sy fizahan-tany any India
Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Editorial • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Rava ny indostrian'ny fizahantany any India
Ny Tale jeneralin'ny Le Passage mankany India, Amit Prasad, dia mpitondra hajaina indrindra izay manana traikefa 40 taona amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Tsy dia misy loatra ny zavatra ataon'ny Governemanta India hamelomana indray ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany ao amin'ny firenena.
Raha ny fahitan'ny matihanina efa za-draharaha dia efa ho potika ny indostria.
Ireo izay mbola afaka miaina amin'ny sehatry ny indostria dia tsy maintsy namela ny mpiasa handeha hanapaka ny karamany mba hijanonany ambony fotsiny.
Androany, na dia nahomby nandritra ny 4 taona aza ny orinasa iray, dia nilaza izy fa be ny tokony hampanahy ny amin'ny hoavin'ny dia sy fizahan-tany.
Malemy paika sy mahay miteny, Prasad dia manenina fa tsy dia be ny vita mba hamelomana indray ny indostria, izay manome asa ho an'ny olona an-tapitrisany ao amin'ny firenena. Tsy misy na dia iray aza ny teny fohy, hoy i Amit fa efa ho potika ny indostrian'ny fizahan-tany. Hoy i Prasad:
“Ny governemanta dia mitohy ho mpijery olona tsy misy drafitra na politika apetraka hamelomana azy [fizahan-tany]. Tsy azoko antoka ny anjara asan'ny minisiteran'ny fizahantany amin'ity toe-javatra ity. Tsy misy fifanakalozan-kevitra, drafitra, fanentanana momba ny fifohazana sy ny endrik'i India.
“Ny fizahan-tany any an-toerana dia ny fifantohana tampoka… ny tsy fahatsapana ny sandam-bola sy ny fifanakalozana vahiny entin'ny mpanjifa vahiny. Tsy maintsy namono ny mpiasa izahay ary nanapaka ny fandaniana / ny karamanay. Avelao ny fanohanana rehetra, tsy misy mazava akory avy amin'ny governemanta raha toa ka rehefa tokony handoa ireo sora-tanana voamarina ho an'ny 18/19. Io dia niteraka olana goavana tamin'ny fivezivezena.
“Nandritra ny efa-polo taona mahery tao amin'ny orinasa dia tsy mbola nahatsapa ho tsy afa-manoatra aho. Tsapako ho an'ireo mpiasa miasa tanora izay very asa na [mahavita] mivelona amin'ny karama voatapaka. Ny governemanta dia manohy mahita an'io ho toy ny indostrian'ny sangany, tsy mahatsapa ny karazana fotoana asa natolony ny ampitan'ny mponina, hatramin'ny mpiasan'ny hotely ka hatramin'ny mpitari-dalana, mpamily ary mpanao asa tanana manerana an'i India.
“Azoko antoka fa hiodina ihany ny raharaha amin'ny farany. Tsy fantatrao hoe firy ny orinasan-dia hahavita hahita izany andro izany. ”
Ireo fanehoan-kevitra ireo dia mariky ny fahasosorana avy amin'ny matihanina ambony iray izay nitana andraikitra lehibe tamin'ny masoivoho maro samihafa ao amin'ny firenena. Noho ny hamafin'ny toe-javatra noho ny fiantraikan'ny COVID-19, ny Governemanta India dia tsy maintsy mirotsaka hiaina aina hiverina amin'ny fitsangatsanganana sy fizahantany.